बन्जीजम्पमा संग-संगै अभिनेत्री पुजा शर्मा र युद्ध बानियाँ, प्रेम झाङ्गिएकै हो त ? (भिडियो सहित) - www.dthreeonline.com
बन्जीजम्पमा संग-संगै अभिनेत्री पुजा शर्मा र युद्ध बानियाँ, प्रेम झाङ्गिएकै हो त ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: १८:३९:०५
इटहरी/ नेपाली चलचित्र क्षेत्र यतिबेला विवाद र आलोचनाले अलि बढी चलायमन छ । हुन त चलचित्रमा अभिनेता अभिनेत्रीको अनुबन्ध, चलचित्र घोषणा, छायांकन सुरु र सम्पन्नका कार्य पनि भैरहेका छन् । तर, हलमा माकुराले राज्य गरिरहेको बेला चलचित्र उधोगको भविष्य कता भन्ने प्रश्न खडा भैरहेको छ । यहाँ कुरा कलाकारकै धेरै छ । प्रेम चर्चा, घुम्न गए, सहयोग गरे, गर्भवती भए, फिल्ममा साईन गरे लगायतका अनेक कुराहरु भैरहेको अवस्थामा हामी पुजा शर्माको कुरा गर्दैछौ । नेपाली चलचित्र उधोगमा एक सफल नायिकाको नाम लिदा अभिनेत्री पुजा शर्माको नाम पनि आउँछ ।
पछिल्ला दिनमा उनको चर्चा फिल्म भन्दा बाहिर छ । हुन त फिल्ममा चर्चा होस पनि कसरी, काम ठप्प छ । त्यसैले पनि होला उनको बढी चर्चा प्रेम प्रसङ्ग, घुमघाम लगायतमा बढी छ । केही समयअघि देखि युद्ध बानियाँसंग नाम जोडिएपछी उनको प्रेमचर्चाले स्वरुप बदल्यो । अभिनेता आकाश श्रेष्ठलाई भिनाजु भनिरहेका फ्यानहरु जिल्ल परे । पुजा अहिले बानियाँसंग घुमघाममा ब्यस्त छिन् । शुक्रबार टिकटकमा पुजाले एक भिडियो सार्बजनिक गरिन् । जस्मा उनले बन्जिजन्प गर्दैछिन् । यता युद्धले पनि आफ्नो टिकटक तथा इन्स्टा स्टोरिमा बन्जीजम्पको भिडियो सार्बजनिक गरे । हेर्नुस भिडियो
लगभग १ घन्टाको अन्तरमा यी २ ले सो भिडियो सार्बजनिक गरे । एकैठाउ बन्जीजम्प गर्नु, एकै समय भिडियो सार्बजनिक गर्नुले यी २ संगै बन्जीजम्प गर्न पुगेको हुन् भन्न सकिन्छ । यता टिकटक प्रयोगकर्ताले पनि २ जना संगै बन्जीजम्प गर्न गएको कमेन्ट गरेका छन् । आकाशसंगको सम्बन्ध बिग्रेको चर्चा पछि गाडी किनेर चर्चामा आईन भने स्विमिङ पुलमा सिनेपत्रकार र गायक लगायतसंग मस्ती गर्दा आलोचित बनिन भने अहिले युद्धसंग बन्जीजम्प गर्दा चर्चामा छिन् । केही समयअघि पुजाले कसैलाई बुझ्दैछु, तर त्यो आकाश हैन भनेकी थिइन् । त्यसलगत्तै उनको नाम युद्ध बानियाँसंग जोडिएको हो । के यतिबेला पुजाले युद्धलाई बुझ्दै गरेकी हुन त ? जे होस जोडि चाहिँ मिलेको छ है ।